Mpahay siansa no namorona ny "Atlas ny Atidoha" - News Fitsipika
Mpahay siansa no namorona ny "Atlas ny Atidoha"
Mampiasa atidoha fitarafana, mpahay siansa nanao sarintany maneho ny fomba sy ny dikany teny no mifanitsy faritra samihafa manerana ny atidoha
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Neuroscientists mamorona 'Atlas' ny teny mampiseho ny fomba Voalamina ao amin'ny atidoha” nosoratan'i Iana Sample Science mpamoaka lahatsoratra, fa theguardian.com tamin'ny Alarobia 27 Aprily 2016 17.00 UTC
Mpahay siansa namorona ny "Atlas ny atidoha" izay manambara ny fomba ny heviny ny teny no nandamina faritra samihafa manerana-tsodina.
Toy ny maroloko firakotra voapetaka ny cortex, ny Atlas mampiseho amin'ny tsirairay ny fomba hues avana teny sy ny foto-kevitra izy ireo mampita azo atambatra miaraka amin'ny clumps ny fotsy zavatra.
"Ny tanjona dia ny hanorina goavana Atlas izay mampiseho ny lafiny voafaritra tsara iray ny teny dia aseho ao amin'ny atidoha, amin'ity tranga ity semantics, na ny dikany amin'ny teny,"Hoy Jack Herim, ny neuroscientist tao amin'ny University of California, Berkeley.
Related: Synaesthesia afaka manampy antsika hahatakatra ny fomba ny atidoha mandray ny teny | Cathleen O'Grady
Tsy misy tokan-tena atidoha faritra mihazona teny iray na hevitra. Ny tokan-tena atidoha toerana dia mifandray amin'ny maro mifandraika teny. Ary tokana ny teny tsirairay Manazava ny toerana maro samihafa atidoha. Miara-manao ny tambajotra izay maneho ny heviny ny tsirairay ny teny ampiasaintsika: ny fiainana sy ny fitiavana; ny fahafatesana sy ny hetra; rahona, Florida sy ny Bra. Rehetra ny hazavana ny tambajotra.
Mpahay siansa namorona ny sarintany mampiseho izay faritra atidoha rehefa nandre teny samy hafa.
Nofaritana ho toy ny "Tour de force" iray mpikaroka izay tsy nandray anjara tamin'ny fianarana, ny Atlas mampiseho ny fomba fitarafana maoderina dia afaka manova ny fahalalantsika ny fomba ny atidoha manao ny sasany amin'ireo asa manan-danja indrindra ny. Amin'ny fanampiny mandroso, ny teknolojia mety hisy vokany lalina teo amin'ny fitsaboana sy ny saha hafa.
"Mety ho io fomba azo ampiasaina mba decode vaovao mikasika ny zavatra teny ny olona iray no nahare, Famakiana, na mety mihitsy aza mieritreritra,"Hoy Alexander Huth, ny voalohany mpanoratra eo amin'ny fianarana. Iray mety ho fampiasana ny teny decoder izay mety hamela ny olona nampanginina ny moto neurone aretina na mihidy-in aretina mba hiteny amin'ny alalan'ny solosaina.
Mba hamorona ny Atlas, ny mpahay siansa ny atidoha ny olona ao ny asa raha mbola nihaino ny tantara mamaky avy ao amin'ny Ny Samoina Radio Ora, ny US onjam-peo fampisehoana. Avy eo dia mifanentana ny transcripts ny tantara miaraka amin'ny atidoha angona asa atao mba hampisehoana ny fomba vondrona ny mifandray teny Niteraka neural valiny ao 50,000 ny 80,000 pea-salantsalany toerana manerana ny atidohany cortex.
Related: Afaka ny atidoha Notarafina hampiseho ny fitondran-tena?
Huth Nampiasa tantara avy amin'ny Radio Samoina Ora, satria fohy izy ireo, ary maharesy lahatra. Arakaraka enthralling ny tantara, dia vao mainka matoky ny mpahay siansa fa mety ho ny olona ho scanned dia mifantoka amin'ny teny sy ny tsy mikisaka intsony. Fito ny olona nihaino ny roa ora ny tantara isan-. Per olona, izay nahatratra ny mandre teny mafy 25,000 teny- ary mihoatra noho ny 3,000 isan-karazany teny – raha nandry tao amin'ny scanner.
Ny Bokin-tsarintany mampiseho ny fomba sy ny teny Anarana iombonana mampiasa mitovy faritra ny atidoha. Ohatra, eo amin'ny ankavia-tanana ilany ny atidoha, ambonin'ny sofina, dia iray amin'ireo faritra kely izay maneho ny teny hoe "lasibatra". Toy izany koa mamaly faritra "maty", "Voaheloka", "Novonoina" sy "niaiky". Ao amin'ny atidoha ny tanana havanana lafiny, akaikin'ny an-tampon-doha, dia iray amin'ireo toerana atidoha mampandeha araka ny fianakaviany iombonana: "Vady", "Vady", "Ankizy", "ray aman-dreny".
Teny tsirairay dia aseho amin'ny toerana mihoatra ny iray, satria mazàna no teny maromaro dikany. Misy faritra iray ny atidoha, ohatra, reliably mamaly ny teny hoe "ambony", miaraka amin'ny teny hafa izay mamaritra ny akanjo. Fa ny teny hoe "ambony" dia mampiasa faritra hafa maro. Ny iray tamin'izy ireo mamaly isa sy ny fandrefesana, iray hafa ny trano sy ny toerana. Ny mpahay siansa namorona ny fifandraisana namany Sary izay ny vahoaka dia afaka hijery ny atidoha Atlas.
manaitra, ny atidoha atlases dia toy izany koa ho an'ny rehetra ny mpandray anjara, milaza fa ny atidoha nikarakara ny heviny ny teny Toy izany koa. Ny mpahay siansa ihany no scanned dimy lahy sy roa vavy, na izany aza. Rehetra ny tompon miteny anglisy, ary ny roa no mpanoratra ny fanadihadiana nivoaka tamin'ny Nature. Izany no tena azo atao fa ny olona avy amin'ny fiaviana samy hafa sy ny kolontsaina hafa ho zotran atidoha atlases.
Efa voaomana hiady miaraka amin'ny Atlas, mpikaroka afaka miaraka ny atidoha sombin tambajotra izay maneho wildly hevitra samihafa, avy amin'ny isa mba hamono olona sy ny fivavahana. "Ny hevitra ny vono olona dia aseho be dia be ao amin'ny atidoha,"Herim hoy.
Amin'ny alalan'ny fampiasana ny angon-drakitra izany ny fipetrany ny, ny vondrona asa nanomboka tamin'ny atlases vaovao izay mampiseho ny fomba mihazona ny atidoha vaovao amin'ny lafiny hafa ny teny, avy phonemes mba Syntaxe. Ny atidoha Atlas ny tantara rafitra hita hatreto saro-takarina, na izany aza. "Isaky ny tonga miaraka amin'ny napetraka ny tantara endri-javatra, tokoa isika no nilaza fa tsy ny tsara napetraka ny tantara endri-javatra,"Hoy Herim.
Related: 'Very' fiteny voalohany hamela maharitra marika eo amin'ny atidoha, fianarana vaovao manambara
Uri Hasson, ny neuroscientist ao amin'ny Oniversiten'i Princeton, nidera ny asa. Tsy toy ny maro ny fikarohana izay atidoha nijery asa, rehefa mitokana teny na fehezanteny nampilazaina, Herim ny ekipa efa manazava ny fomba ny atidoha niasa tao amin'ny tena-javatra izao tontolo izao, hoy izy:. Ny dingana manaraka, hoy izy:, dia ny mamorona feno sy marina kokoa zotran atidoha Atlas. amin'ny farany, Hasson mino dia ho azo atao ny hanangana indray ny teny ny olona iray dia mieritreritra amin'ny atidohany asa. Ny vokany dia goavana etika. Mahasoa kokoa ny fampiasana iray hahita asa atidoha zatra hanombana raha ara-politika no mahomby hafatra ampitaina ho an'ny daholobe. "Misy fiantraikany be dia be, ary dia zara raha mikasika ny ambonin'ny,"Hoy izy.
Lorraine Tyler, ny fandroson'ny ara-pahalalana sy ny lohan'ny neuroscientist ny Center for miteny, Fiteny sy ny atidoha ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge hoy ny fikarohana dia ny "Tour de force amin'ny votoatiny sy ny fomba fiasa". Fa ny atidoha Atlas amin'ny endrika amin'izao fotoana izao dia tsy hisambotra tsara fahasamihafana amin'ny teny dikany. Raiso ny teny hoe "latabatra". Izany dia mety ho mpikambana ao amin'ny vondrona maro isan-karazany, hoy i Tyler. "Mety ho zavatra hohanina eny, ny fanaka hazo, zavatra mavesatra, zavatra manana tongotra efatra, tsy selan'izy zavatra, sy ny sisa. Io karazana fanazavana zotran-tsipiriany izay manome fahafahana mba hampiasaina teny flexibly very ao amin'ny fanadihadiana,"Hoy izy. "Na dia fikarohana no lalana-vilanin'ny amin'ny sehatra, mbola betsaka mba hianatra mikasika ny fomba semantics dia aseho ao amin'ny atidoha. "
Ho Apple Lazao New iPhones Sept. 10?
Iza Windows Laptop Afaka Manolo ny MacBook Pro?
19823	9 Article, Iana Sample, fiteny, Neuroscience, News, Science, UK Home News, UK Science
← Europe V Google: Ahoana no Nahatonga ny ady aty Android Enina avy ny tsara indrindra Wi-Fi Mpandahateny →